Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Ukubhuka ngenqwelomoya ukuya eUSA kuyenyuka
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ukubhukisha iinqwelomoya eziya e-USA kuyanda.
Ukubhukisha iinqwelomoya eziya e-USA kunyukile kulandela izibhengezo ezibini zokuba indawo ekuyiwa kuyo iza kuvulwa kwakhona kubakhenkethi abagonyelweyo abavela kwamanye amazwe ngoNovemba.
Incopho yokuqala yayikukuhamba ngokukhawuleza emva kokunyenyiswa kwezithintelo kwiveki eqala nge-8 kaNovemba.
Incopho yesibini yayingaphezulu kweKrisimesi, ifikelela kwi-16% yokubhukisha ngeveki yeKrisimesi kunye ne-14% kwiveki engaphambi koko.
Ukonyuka okunyukayo kokubhukisha e-USA ngexesha leKrisimesi kulindeleke kwiiveki ezizayo.
Uphando olutsha lubonisa ukuba ukubhukisha ngenqwelomoya kwi i-USA inyukile kulandela izibhengezo ezibini zokuba indawo ekuyiwa kuyo izakuphinda ivulelwe abakhenkethi bangaphandle abagonywe ngoNovemba. Phakathi ku-Okthobha, ukubhukisha ngeveki kugqithe kwi-70% yamanqanaba angaphambi kobhubhane.
Isibhengezo sokuqala senziwa nge-20th NgoSeptemba, xa i-White House yathi iindwendwe ezivela e-United Kingdom, e-Ireland, kumazwe angama-26 e-Schengen, i-China, i-Indiya, uMzantsi Afrika, i-Iran ne-Brazil ziya kuvunyelwa ukuba zingene i-USA, ngaphandle kokuvalelwa yedwa, ukuba nje baye bagonywa ngokupheleleyo. Oko kubangele ukusabela kwangoko, kunye nokubhukisha iveki ngeveki ukusuka e-UK ukutsiba iipesenti ezingama-83, ukusuka eBrazil ukutsiba ngama-71%, nokusuka EU Ukutsiba i-185%!
Isaziso sesibini senziwa nge-15th Ngo-Okthobha, xa uNobhala we-President oNcedisayo kaMongameli wase-US, uKevin Munoz, wabiza i-8th NgoNovemba njengoko izithintelo zomhla ziya kuthotywa. Ukubhukishwa kweveki ngeveki kunyuke phezulu, kugxuma i-15% ukusuka e-UK, i-26% ukusuka kwi-EU kunye ne-100% esuka eBrazil.
Ukujonga ukuhanjiswa kogcino oluqinisekisiweyo, ukufika ngoNovemba noDisemba, ukusuka kwezo marike zontathu (eBrazil, EU kunye ne-UK), kwakukho iincopho ezimbini ezicacileyo. Incopho yokuqala yayikukuhamba ngokukhawuleza emva kokunyenyiswa kwezithintelo kwiveki eqala nge-8th NgoNovemba, ukufikelela kwi-15% yokubhukisha. Incopho yesibini yayingeKrisimesi, ifumene i-16% yokubhukisha ngeveki yeKrisimesi kunye ne-14% kwiveki engaphambili.
Le datha kwakhona ibonisa imfuno enkulu yokuhamba. Ngoko nangoko abantu beva ukuba baza kuvunyelwa ukuba bandwendwele i-USA kwakhona; babhukisha; kunye nesixa esikhulu esibekelwe ukuba sibhabhe ngokukhawuleza kangangoko sinakho.
Kukwanika umdla ukuqaphela ukuba ukubhukisha kwenyukele phezulu nje ukuba kunikwe umhla othile. Oko akumangalisi ngokupheleleyo ngenxa yezizathu ezibini. Okokuqala, ukuqinisekiswa komhla othile kukhuthaza ukuzithemba.
Okwesibini, abo bafuna ukuhamba ngaphambi kokuphela kukaNovemba babengenakukwazi ukuzibophelela de bazi ngokuqinisekileyo ukuba banokuhamba xa befuna. Ukonyuka okunyukayo kokubhukisha e-USA ngexesha leKrisimesi kulindeleke kwiiveki ezizayo.